Gudoomiyaha Midowga Afrika "Soomaaliya iyo Kenya waa inay heshiiyaan" - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Gudoomiyaha Midowga Afrika “Soomaaliya iyo Kenya waa inay heshiiyaan”
Waxaa haatan kulan ay albaabada u xiran yihiin leh magaalada Jabuuti ku leh madaxda urur goboleedka IGAD, halkaas oo la filayo inay ka soo baxaan qodobbo wax ku ool u ah dadka gobolka.
Gudoomiyaha Midowga Afrika, Moussa Faki Mahamat, oo ka mid ah madaxdii furitaanka shirkaas ka hadashay ayaa soo hadalqaaday sida loogu baahan yahay in si degdeg ah xal loogu helo khilaafka diblumaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya.
Shirka waxa uu imanayaa xilli Soomaaliya ay xiriirkii diblumaasiyadeed u jartay Kenya, iyadoo ku eedaysay inay faragelinaysa arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Kenya eeddaasi gaashaanka ayey u daruurtay.
Kulankana waxaa labada dal uga qeybgalaya madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya, iyadoo arrimaha diiradda shirkaas lagu saari doonaan ay k amid tahay khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya labada dal.
Previous articleXiisad ka taagan Xadka Somalia & Kenya & walaac laga muujiyay
Next articleUS starts withdrawing troops from Somalia amid growing instability